SA Discusses Sustainable Development at AU - allAfrica.com
SA Discusses Sustainable Development at AU
Apart from economic matters being discussed at the AU summit being held in Addis Ababa, Ethiopia, South Africa is forced to look at issues of sustainable development.
SA Info, 28 January 2013
Achieving sustainable development and resolving regional conflicts are likely dominate discussions at the 20th African Union (AU) summit that opened in Addis Ababa, Ethiopia on… Read more »
President Jacob Zuma and other Heads of States pose for a group photo after the official opening ceremony of the African Union Summit in Addis Ababa, Ethiopia.
Govt of SA, 26 January 2013
President Jacob Zuma has today, 25 January 2013 arrived in Addis Ababa, Ethiopia to attend the 20th Ordinary Session of the African Union Assembly of Heads of State. Read more »
Africa: Zuma to Lead SA Team to AU Summit
SA Info, 25 January 2013
President Jacob Zuma will lead a South African delegation to the 20th African Union (AU) Assembly at the weekend. The gathering in Addis Ababa, Ethiopia will mark the 50th… Read more »
South African President Jacob Zuma walks with Home Affairs Minister Nkosazana Dlamini-Zuma after her election as the first woman leader of the African Union Commission.
AU Summit Urged To Tackle Human Rights Crises
The chairperson of the African Union Commission, Nkosazana Dlamini-Zuma, has said the resurgence of conflict in Mali and the Democratic Republic of Congo is regrettable, as ... Read more »